Madagasikara sy ny Jeux des Iles (Ã©parses) | Hery - Tsiky dia ampy |
Madagasikara sy ny Jeux des Iles (Ã©parses)
2015-08-06 @ 14:18 in Izaho sy ny ahy
Efa natsidiko tao amin'ny facebook-ko ihany ny hevitro mikasika ilay resaka sainam-pirenena malagasy sy Catherine Paoli fa averiko kely eto. Ny Facebook mantsy mandalo (malaky be ny fanjavonany) fa ny eto mitoetra.
Izaho aloha hatramin'izay tsy dia tena mpanaraka an'ity lalaon'ny nosy ity firy. Tamin'ny taona 1990 no nalaza tamiko ny Lalaon'ny Nosy satria tany Madagasikara no toerana nanaovana azy. Lalaon'ny Nosy faha-telo tamin'izay. Raha ny tokony ho izy dia tamin'ny 1989 no tokony natao tao Madagasikara ny andiany faha-telo. Tsy vonona anefa ny fanjakàna izay teo ambany fitarihan'ny filoha Ratsiraka tamin'izany dia nahemotra ny 1990 ilay izy. Nisy rahateo ny famangian'ny Papa Joany Paoly II tamin'ny taona 1989 ka angamba tsy zakan'ny firenena miaraka.
Tamin'ity taona 2015 ity indray aho izany vao naharaka tsy fidiny ny JIOI (Jeux des Iles de l'Océan Indien) rehefa nisy korotandrotana ny fanomanana sy fanatanterahana azy. Araka ny hita tamin'ny filazam-baovao samihafa dia talohan'ny nanombohana dia efa nisy ny fifankahazoan-kevitra politika ka ny disadisa dia teo amin'i La Frantsa (La Réunion) sy i Comores mikasika indrindra an'i Mayotte. Noho ny fitsapakevi-bahoaka izay nataon'ny vahoakan'i Mayotte tamin'ny 2009 dia lasa departemanta manana zo feno ao anatin'i La Frantsa izy. Nanomboka ny 1 janoary 2014 no nihatra tanteraka izany ka lasa sainam-pirenena Frantsay ny sainy ary fitantanana Frantsay no ao aminy. Tsy nanaiky an'izany anefa ny Komorianina fa nihevitra ny Frantsay ho toa ny mpanjana-tany. Mihenjan-droa izany ny tady mikasika an'i Mayotte. Nandritra ny fanomanana ny Lalaon'ny Nosy ary dia nisy ny fanontaniana momba ny endriky ny ho fandraisan'i Mayotte. Ho eo ambany fanevan'i La Frantsa ve izy, izay nanohina ny Komorianina, sa ho toa ny teo aloha izay nananany faneva manokana. Nisy ihany anefa ny marimaritra iraisana nony farany dia ny hoe tsy hitondra saina mihitsy ny Mahorais (mponina avy any Mayotte) fa ho eo ambany fanevan'ny JIOI hatrany izy.
Nony nanomboka anefa ny lalao, nandritra ny filaharana tamin'ny lanonana fanokafana dia nilahatra taorian'ny sainam-pirenena Frantsay i Mayotte. Ny azo inoana dia ireo mpilalao no naniry ny hitondra ny fanevan'i Frantsa satria efa departemanta frantsay ry zareo. Tsy nankasitrahan'ny delegasiona komorianina izany fihetsika izany ka nahatonga azy ireo nanapa-kevitra ny tsy handray anjara intsony amin'ny lalao 2015. Nomelohiny ny tsy fandraisan'ny komity mpikarakara fepetra hentitra hampanaja izay nifanarahana dia ilay hoe tsy mitondra sainam-pirenena i Mayotte. Dia tena tsy nandray anjara tokoa ry zareo fa dia nody. Araka ny heno anefa dia nisy Komorianina vitsivitsy tsy nandray ilay fiaramanidina tokony hitondra ny delegasiona nody. Angamba mba nanao vakansy kely. Nalahelo noho io fanapahan-kevitry ny Komorianina io ny komity mpikarakara ka nanapa-kevitra niaraka tamin'ireo firenena mpandray anjara sisa fa tsy hasiana saina intsony mandritra ny fandraisana ny medaly ho an'ny mpandresy, ary tsy hohiraina intsony ny hiram-pirenen'ny voalohany. Izany no natao dia mba ho fanehoana fa marina tokoa ny nataon'ny Komorianina, ary koa fisakanana ny Mayorais tsy hampiasa ny saina frantsay mandritra ny fotoana fifaninanana.
Teo amin'izay no nanomboka ny tantara nidiran'ny Malagasy. Araka ny video efa miparitaka. Raha handray ny medaly volamena ramatoakely Marthe Ralisirina izay nisalotra ny sainam-pirenena malagasy dia niantsoantso ilay ramatoa antsoina hoe Cathérine Paoli hoe "non, pas le drapeau". Dia nanatona izy ary nanala ny saina teny amin'i Marthe. Araka ilay nifanarahana tsinona dia tokony tsy mitondra saina rehefa miakatra maka medaly ary tsy misy hiram-pirenena.
Ny tena nahakivy ny maro dia ilay fomba natao ho fampiharana ny fitsipika fa tsy ny fitsipika velively. Izany hoe ilay ramatoa nentanim-po be loatra hanatanteraka ny asany no olana. Azo natao tsara ny nilaza mialoha an'ilay mpihazakazaka, ary azo natao tsara koa ny niteny moramora azy hanome ny sainam-pirenena na niantso ny mpanazatra azy hitazona ny sainam-pirenena aloha. Fa ilay fisintonana no tsy nety.
Taty aoriana moa dia nitombo tsikelikely ilay resaka nisy ny fanangonan-tsonia, nisy ny fangatahana fifonana am-pahibe-maso, nisy hatramin'ny hoe asaivo mody tahaka ny an'ny Comores ny ankizy... nefa ny antony dia mifanohitra tanteraka amin'ny nataon'ny Comores. Ny Komorianina nasainy nody ny ankizy satria tsy narahina tsara ilay fifanarahana hoe tokony tsy mitondra saina ny Mayotte. Dia ny Malagasy indray izany hody satria nasaina nanaraka ilay fifanarahana.
Taorian'iny tranga tamin'ny ekipa malagasy iny dia nifamahofaho ny resaka fitondrana saina. Nisy ny nanaparitaka ny sary niseho taty aoriana izay nisian'ireo Mahorais (izany hoe ny ekipan'i Mayotte) nisalotra sainam-pirenena teny ambony podium. Sary tsy misy idirany mihitsy satria mandritra ny fametrahana ny medaly sy fanaovana ny hira no tsy afaka mitazona saina. Sady mety efa nanenina tamin'ny fihetsika nataony ilay Catherine Paoli ka tsy niakatra intsony. Nisy kosa anefa avy eo ny nataon'ny filohan'ny departemanta La Réunion izay nitondra ny saina Frantsay sy nametraka izany teo antongotry ny mpilalaony mialoha ny hanomezany medaly azy. Ka tsy fantatra intsony hoe hifanarahana ve sa tsia.
Na izany na tsy izany dia namoaka fianalntsiny ho an'ny vahoaka malagasy ho valin'ny fangatahan'ny minisitry ny fanatanjahan-tena malagasy ny komity mpikarakara. Irariana mba hilamina izany ny momba an'iny ka tsy antsoina hody izany ny ekipa malagasy izay efa manao izay ho afany.
Raha ny fanjakana indray no andrasana hanao hetsika eo dia hiandry an'i Paoli indray. Ny "Iles éparses" izay tokony hahazoany tombony ara-toekarena maro aza tsy nasiany maso noho ny tahotra ny Frantsay, vao maika fa izay "Jeux des iles" any La Réunion no hanoherany an'i Lafrantsa? Manofinofy.